भर्ख'रै हेर्नुहोस्, उर्लियो मानवसागर, हल्लियो काठमाडौँ, बालुवाटारमा खैला**बैला Kathmandu - Onlines Time
भर्ख’रै हेर्नुहोस्, उर्लियो मानवसागर, हल्लियो काठमाडौँ, बालुवाटारमा खैला**बैला Kathmandu
सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रुपन्देहीको भैरहवामा पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। रुपन्देहीका विभिन्न स्थानबाट भैरहवा पुगेका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले सडकमा विरोध र्‍याली प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले सरकार सर्वसत्तावादको बाटोमा गएको, बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार असफल रहेको तथा पार्टिका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा प्रशासन र नेकपाले गरेको अवरोधका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको जनाएको छ ।
देशका विभिन्न जिल्लामा एकैसाथ गरिएको विरोध प्रदर्शनमा पार्टिका शिर्ष नेताहरु सम्बोधनको लागि पुगेका थिए । रुपन्देहीमा आयोजित विरोध सभालाई कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका नेता भरत शाहले सम्बोधन गरेका छन् ।
नेताहरुले सरकारका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासनले जरो गाडेको आरोप लगाउँदै सोही कारण अहिले गणतन्त्र र संघीयता विरोधी शक्तिहरु सल्बलाईरहेको बताए । नेता पाण्डेले कम्युनिष्टको सरकार कमाउनिष्ट भएको आरोप लगाए । उनले जताततै भ्रष्टाचारले जरो गाडेको बताउँदै विमानदेखि महामारीबेला औषधि खरिद गर्दासमेत मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गरेका आरोप लगाए ।
पाण्डेले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी नै खतरामा परेको भन्दै यो सरकारले उपलब्धीको रक्षा गर्न नसकेको बताए । पाण्डेले अहिलेको व्यवस्थाको रक्षा गर्न, मुलुक बचाउन र भ्रष्ट सरकारलाई सही दिशामा काम गर्न कांग्रेसले मुलुकभर खबरदारी गरेको जनाए ।
आगामी निर्वाचन पछि कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्ने र नेकपा विलय हुने उनको दावी छ । कांग्रेस नेता एवं संघीय संसदका सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचारकै कारण जनतामा वितृष्णा पैदा भएको बताए । उनले यसैको परिणामस्वरुप सडकमा राजावादीको आन्दोलन सुरु भएको उल्लेख गर्दै सरकारले अझै पनि आँखा नखोल्ने हो भने परिणाम अर्कै आउने बताए ।
वर्तमान सरकारले सबै संबैधानिक निकायमा राजनीतिकरण गरेको उनको आरोप छ । शाहले मल नपाएर जनता आजित हुने, महामारीमा औषधीसमेत नपाउने अवस्था आउनु निकै दुर्भाग्य भएको बताए ।
कांग्रेस नेता एवं संघीय सांसद प्रमोदकुमार यादवले वर्तमान सरकारले जनहीतमा कुनैपनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले जिल्लाबासी कृषिमन्त्री भएर पनि यहांका किसानले समयमै मल नपाउनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै समयमै मल नदिने कृषिमन्त्रीलाई अब रुपन्देही प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने बताए ।
विरोध सभामा कांग्रेस जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाक गद्दी, पूर्व सभापति रामचन्द्र ढकाल, पूर्व सांसजद इस्तियाक अहम्मद खांन, जिल्ला सचिव रामकृष्ण खाँण, क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति हिरा बहादुर खत्री, सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने लगायतले कम्युनिष्ट सरकार सामन्ती, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, नैतिकहीन भएको आरोप लगाए ।
यस्तै नेपाली कांग्रेस पश्चिम नवलपरासीले पनि सदरमुकाम परासीमा बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । पार्टी कार्यालयबाट निस्केको जुलुस जिल्ला प्रशासन हुंदै बुद्ध चोकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले सरकार विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिदै गएको र संवैधानिक संकट निम्ताउन खोजेको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीका नेताहरुको घेराबन्दीमा पर्दै गएको र उनले चालेका हरेक कदम सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख भएको समेत आरोप लगाए । कँडेलले कांग्रेसले अहिले सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध सांकेतिक आन्दोलन थालेको उल्लेख गर्दै सरकारका कृयाकलाप नसच्चिए शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
Prevमध्य रातमा सेतिको खोचमा ! १ जोडि यस्तो अवस्थामा, पिसाब फेर्छु भन्दा धन्न ज्या’न गएन
Nextहेर्दा सिधासाधा युवायुवती, काम चाँही यस्तो गरेपछि परे प्रहरीको फन्दामा